Iyo Marchesi Antinori 2017 Tignanello (yakagadzirwa neSangiovese uye zvidiki zvidimbu Cabernet Sauvignon uye Cabernet Franc) yakasviba, inowedzera, uye inokoka waini. Ndakaravira sampu yangu mushure mekuraira kaviri uye ndakafadzwa nehunhu hwewaini zvakanyanya uye pachena kweanonhuwira. Iko kune symphony yemichero yakasviba neiyo dema cherry, plum, zvinonhuwira, uye fodya inotapira. Ini ndinonyanya kufadzwa nezano riri kure rekurapa kana menthol yemakwenzi ini yandakawanawo mune mamwe mavheji ane michero kubva kuTignanello estate muna 2017. Kune yekuomeswa kwemaminerari noti ye yakapwanywa chaki zvakare. Iko kupisa uye kuoma kwewaini yakawedzera kune kunhuhwirira kwehukuru hwewaini (yechitatu yakaderedzwa goho). Zvichakadaro, muromo-upfu wakanyatsogadzirwa kuti uchengetedze unyoro uye kutsiga.
Dhizaina rakakura, rakachenesa, uyu mutsvuku unoburitsa akachena zvinonhuwira uye zvinwiwa zvevatema currant, Cherry, violet, flint, fodya, uye zvinonhuwira zvekubheka. Izvi zvinowedzerwa, asi zvichitsigirwa neine solid, dense matrix yematannins, saka zvese zvinowanikwa zviripo, asi izvi zvinoda nguva yekubatanidza. Inotapira inotapira, kuibva kupera. Sangiovese, Cabernet Sauvignon uye Cabernet Franc. Zvakanakisa kubva 2022 kusvika 2040.